Ficilkii Alexandre Lacazette Oo Sababay Isbeddel Lagu Sameeyo Sharciga Kubadda Cagta | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaFicilkii Alexandre Lacazette Oo Sababay Isbeddel Lagu Sameeyo Sharciga Kubadda Cagta
Ficilkii Alexandre Lacazette Oo Sababay Isbeddel Lagu Sameeyo Sharciga Kubadda Cagta
Sharci sameeyeyaasha kubadda cagta ee magacooda loosoo gaabiyo IFAB ayaa isbeddel ku samaynaya sharciga kubadda cagta, kaddib ficilkii uu sameeyey Alexandre Lacazette kulankii Tuf Moor ee Sabtidii, markaas oo uu dhulka isla dhacay iyadoo aanay cidina waxba yeelin.
Laacibka reer France ayaa noqday mid lagu xaraabayso iyadoo ay falanqeeyeyaasha ciyaaraha ee Gary Lineker, Ian Wright iyo Dion Dublin ay ku maadsadeen iyagoo iska tuuray kursigii ay ku fadhiyeen, lugtana is qabtay iyagoo qaylinaya si la mid ah Alexandre Lacazette.
Tababaraha Burnley ee Sean Dyche ayaa sheegay in qaylada Alexandre Lacazette ay ahayd mid xad-dhaaf ah iyadoo aan wax badan lagu samaynin.
Alexandre Lacazette ayaa waxa qalad ku galay Erik Pieters laakiin sida uu u cabaaday ayaa laga maqlayay garoonka oo dhan maadaama uu madhnaa garoonku oo aanay wax taageereyaal ahi fadhiyin, waxaanu iska dhigay sidii mid dhaawac halis ahi gaadhay, si uu garsooraha ugu cadaadiyo inuu kaadh siiyo Pieters oo isaguna qirtay inuu ka naxay qaylada Lacazette oo uu u qaatay inuu si xun u dhaawacmay.
Alexandre Lacazette ayaa ciyaarta sii watay kaddib xoogaa daaweyn ah oo garoonka dhexdiisa loogu sameeyey, waxaanay taasi muujisay in dhawaaqiisu ahaa ka badbadis.
Kaddib dhacdadan, IFAB ayaa waxay garsooreyaasha siinaysaa awood dheeraad ah oo ah in ciyaartoyda qayliya iyadoo aan wax weyn lagu samaynin, si ay marin habaabin u sameeyaan, ay kaadh siin karaan.
Garoomada madhan ayaa waxay keeneen in kaamirooyinka iyo makarafoonnadu ay soo gudbiyaan hadallada ka dhaca garoonka dhexdiisa, sida tababareyaasha laynka agtiisa isku qabsada iyo xataa ciyaartoyda iyo garsooreyaasha.
Garsoorihii hore ee caanka ahaa ee Premier League ee Mark Clattenburg ayaa sheegay in waqtigii uu shaqada ku jiray aanu maqli jirin qaylada ciyaartoyda marka ay dhaawacyo soo gaadhaan sababtuna ay ahayd sawaxanka taageereyaasha, laakiin hadda wax walba la maqlayo, taasina ku keenayso garsooreyaasha inay marin habaabaan.